WARBIXIN: Saddex Xiddig Oo Ay Tahay In Uu Jose Mourinho La Soo Saxiixdo Si Uu Pogab Uga Soo Saaro Qaab Ciyaareed Fiican – Kooxda.com
Home 2018 February Ingiriiska, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino WARBIXIN: Saddex Xiddig Oo Ay Tahay In Uu Jose Mourinho La Soo Saxiixdo Si Uu Pogab Uga Soo Saaro Qaab Ciyaareed Fiican
WARBIXIN: Saddex Xiddig Oo Ay Tahay In Uu Jose Mourinho La Soo Saxiixdo Si Uu Pogab Uga Soo Saaro Qaab Ciyaareed Fiican
Imaatinkii Nemanja Matic ee Man United ee xagaagii hore ayaa loo malaynayay in ay Paul Pogba xoriyad u siinayso in uu horay u socdo khadka dhexe ee weerarkana ka ciyaaro si uu kooxda uga caawiyo in ay ciyaarta wax ka badasho maadama uu awood u leeyahay caawinta iyo waliba gool dhalinta.
Si kasta ha ahaatee Waxa cadaatay in aanu Pogba wali xoriyad u helin si uu horay ugu socdo taas oo ay soo baxday kulankii Tottenham oo uu Jose Mourinho u saaray markii uu khadka dhexe ee daafaca baneeyay dhawr jeer.
Pogba ayaa inta badan raaxo ku dareema in uu ka ciyaaro khadka dhexe ee weerarka ama No.10 laakiin imaatinka Alexis Sanchez ayaa xaalka badalay maadama uu isagu ka ciyaaray No.10 labadii kulan ee ugu dambaysay.
Jose Mourinho ayaa inta badan ku ciyaara shaxdiisa laba xiddig oo khadka dhexe ee daafaca ah taas oo uu kulankii Tottenham ka dhigay Matic iyo Pogba ka hor inta uuna Pogba ku saarin in uu dhawr jeer booska baneeyay khatarna uga timid booskaas.
Hadaba waxa aan warbixintan ku soo bandhigi doonaa 3 xiddig oo uu jose Mourinho u dhaqaaqi karo xagaaga si uu Paul Pogba uga soo saaro qaab ciyaareedkiisa fiican una ogolaada in uu ka ciyaaro booska khadka dhexe ee weerarka.
JULIAN WEIGL (DORTMUND):
Madax xanuunka uu Haatan Pogba Mourinho ku sababayo ayaa ah in ayna United la soo saxiixan xiddig badal u ah Michael Carrick, kaas oo ciyaaraha ka fariisan doona dhamaadka xilli ciyaareedkan kuna biiri doona shaqaalaha tabbaarka ciyaareedka dambe, Laakiin waxa ay sidoo kale United siinaysa fursad ay hal dhagax ku dili karaan laba shimbirood iyaga oo u dhaqaaqi kara xiddiga qaabka Carric oo kale ah sidoo kale Pogba u ogolaan kara in uu horay u socdo.
Xiddigo yar ayaa leh tayada Xiddiga kooxda Borussia Dortmund ee Julian Weigl, 22 jirka ayaa fure u ah kooxdiisa isaga oo awood u leh maamulida kula,ada waaweyn ee cadaadiska leh xiddiga ayaa la tayo leh xiddiga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Real Madrid ee Toni Kroos.
Xiddiga reer Serbia ayaa ah xiddiga oo Jose Mourinho doonayo waliba haatan doonayo in uu Pogba ka soo saaro oo ah in uu yahay xiddig boos ilaa boos ah kana ciyaari kara booska weerarka isla markaasna si deg-deg ah u soo lanaya si uu u caawiyo xiddigaha ay isku kooxda yihiin.
Xiddiga da,yarka ah ayaa sidoo kale leh awood iyo walib dherer fiican kaas oo uu ugu awood sheegan karo xiddigaha ka soo hor jeeda waana xiddig uu jose Mourinho ku buuxin karo booska Marouane Fellaini oo xagaaga xor uga tagi kara United.
Xiddiga Reer Italy ee Jorginho ayaa ka mid ah xiddigaha yar ee uu Jose Mourinho ka heli karo suuqa marka loo eego dhanka baaska iyo waliba kubad dilisya iyo cadaadiska lagu hayo xiddigaha kooxda ka soo hor jeeda.
Jorginho ayaa ah xiddig door weyn ka qaadanaya qaab ciyaareedka kooxda Napoli waxana uu xiddigu la qaab ciyaareed yahay xiddiga haatan kasii fadhiisanaya kooxda ee Carrick marka loo eego heerka kubad maamulida iyo waliba horay u kaxaynta kubada.